Sida dib loogula soo baxo lambarka sirta ah markii aad illowdo | Laga soo bilaabo Linux
In Linux iyo deegaannada kale ee Unix waxaan leenahay lambarka sirta ah ee isticmaalaha iyo sidoo kale kan koontada asalka ah. Markaan ilaawno erayga sirta ah ee isticmaale ma jiro dhibaato weyn maxaa yeelay koontada asalka ama isticmaalka sudo waxaan u adeegsan karnaa aaladaha maamulka qaarkood si aan uga soo ceshano erayga sirta ah ee lumay ama si fudud ugu beddel mid cusub. Dhinaca kale, markay taasi nagu dhacdo xisaabta asalka ah, kan awoodda badan leh, arrimuhu xoogaa way ka dhib badan yihiin, laakiin ma aha dhammaadka adduunka sidoo kale ...
Qiyaas ahaan wadar fudud waxaan ku bari doonaa inaad soo ceshato ama dib u dhigto lambarka sirta ah haddii aad ilowday oo aadan ka heli karin koontadaada mudnaanta leh Linux. Qaabka aan ku sifeynayo waa mid guud u leh dhammaan qeybinta, in kasta oo ay waxoogaa ku kala duwanaan karto iyadoo kuxiran inaad isticmaaleyso bootloader kale, iwm.
Dib u bilaw kombiyuutarkaaga ama kabaha haddii uusan shidaneyn, laakiin isha ku hay shaashadda GRUB, maadaama ay tahay inaad hawlgallo qaarkood ku qabato iyaga. Sidaa darteed, haddii tirinta ay bilaabanto inay soo gasho soo gelitaanka asalka ah, dhaqaaji xuliyaha si tiradu u joogsato oo waqti kuu siiso. Haddii ay dhacdo in shaashadda GRUB aysan soo bixin sababtoo ah waqti ma lihid, waa inaad wax ka beddeshaa qaabeynta GRUB si ay u muuqato, haddii aadan aqoon sida looga tago faallooyinka waxaanan isku dayi doonaa inaan kuu sharxo ...
Hadda mar aan ku jirno GRUB, riix furaha E si aad wax uga beddesho xulashooyinka qaarkood.
Soo hel khad halkaasoo ay ka muuqato magaca sawirka yar yar ee kernel ee la raray oo xariijintiisu ku dhammaato "init = / bin / bash". Haddii aad eegto xariiqan waxaad arki doontaa inay jiraan halbeeg akhrin-keliya (ro) oo ay tahay inaad u beddesho akhris-qorid, taasi waa, rw.
Hadda riix F10 si loo badbaadiyo isbadalada oo dib loogu bilaabo kombiyuutarka wixii aan hadda heli doonana waxay noqon doonaan a bash shell degdeg.
Hadda waa inaad la shaqeysaa qalabka aan ku heyno qolofkan badal ereyga sirta ah:
Saddexdaan amar ayaa dib loo bilaabayaa markii aan badalno lambarka sirta ah waxaanan geli karnaa distro sida caadiga ah ee aan sameyno ...
hay beddelka kale ee habkan, sida isticmaalka LiveCD, ama xitaa nuqul ka sameynta haashka sirta ah ee la garanayo berrinka u dhigma koontada asalka ah ee / iwm / hooska, laakiin kugula talin maayo tan dambe, maadaama haddii aad ilowdo inaad beddesho mar haddii aad marin u hesho, ammaan ma aha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Sida dib loogula soo baxo lambarka sirta ah markaad illowdo
"Awood aad u weyn ayaa leh masuuliyad weyn" - Adeer Ben
Ku jawaab carlos saldaña
Wax ku biiris aad ufiican Isxaaq. Mahadsanid.
Ku jawaab Arcane
Hada maqaal ku saabsan sida loo ilaaliyo sirta.
Qoraal aad u wanaagsan.
Waad ku mahadsan tahay maqaalka, waan ku raacsanahay David, hadda waa waqtigii la ilaalin lahaa jahwareerka si looga fogaado tan, maxaa yeelay markaa "qof walba" ayaa qasan kara.
Ka dibna maqaal ku saabsan sida dib loogu cusbooneysiiyo lambarka sirta ah ee GRUB markaad ilowdo.
Linux Mint 19.1 Tessa ayaa lagu dhawaaqay, oo imanaya Nofeembar ama Diseembar 2018
Noloshu waa mid yaab leh: Kahor Duufaanta ku soo socota Linux Sebtember 13